Fanesorana ny volomaso - Izay rehetra tokony ho fantatrao momba izany | Bezzia
Susana godoy | 18/07/2021 20:00 | beauty
Fantatrao ve hoe inona ny fibatana fehiloha? Azo antoka fa efa nandre izany tany amin'ny toerana tsy tambo isaina ianao ary tsy mahagaga izany. Izany no antony hilazanay anao anio izany rehetra izany. Satria marina fa ny volomaso indraindray avelantsika hadinon'izy ireo kely izy ireo saingy tena manatanteraka asa lehibe ho an'ny masontsika izy ireo.
Noho izany, tsy maintsy mikarakara bebe kokoa azy ireo isika ary mitandrina azy ireo amin'ny fomba tsara. Raha resaka makiazy dia fantatsika fa mila mahita azy ireo lava sy matevina kokoa isika ho an'ny vokatra mahavariana, satria izao, miaraka amin'ny fanandratana ny volomaso dia ho hitantsika zavatra mitovy amin'izany. Fotoana izao hahafantarana azy bebe kokoa!
1 Inona no atao hoe fanondrotana volomaso
2 Mandra-pahoviana ny fiakaran'ny volo?
3 Ahoana ny fanaovana ny fanandratana
4 Soso-kevitra ho an'ny aorian'ny fiakaran'ny volomaso
5 Impiry azo averina ny fitsaboana
Ny fiakarana volomaso dia fitsaboana hatsarana izay hahatonga ny valahanao ho lava kokoa.. Satria ny zavatra ataony dia omeo voajanahary fa omeo sento miakatra miolaka izy. Amin'ny alàlan'ny fanongotana ny volomaso avy any ifotony, dia ho toa lava kokoa amintsika izany. Noho izany, ankoatry ny halavany dia ho hitantsika koa ny fomba mihalehibe kokoa. Ka raha manana kapoka matevina sy tsy matevina ianao dia tonga ny fotoana hikarakarana azy. Satria manomboka amin'ny fotoana andramanao azy dia hanao veloma ny volomaso sandoka mandrakizay ianao. Hanana endrika vaovao amin'ny endrikao ianao ary noho izany dia ho azonao bebe kokoa ny antony nahatonga azy io ho lasa fitsaboana takiana.
Mandra-pahoviana ny fiakaran'ny volo?
Tsy afaka manome fotoana manokana ianao, satria miankina amin'ny karazana volomaso, ny hakitroka na ny kalitaony amin'ny ankapobeny ny zava-drehetra. SAINGY eny, mieritreritra fotoana eo ho eo isika dia hilaza fa afaka dimy herinandro eo ho eo raha mbola maharitra ity teknika ity. Na dia marina aza fa indraindray mety hahatratra 8 herinandro. Na eo aza izany, dia mendrika izany ary mendrika azy tokoa izany vokatra izany izay mamela antsika.
Ahoana ny fanaovana ny fanandratana
Na dia mety samy manana ny fomba fanaony aza ny foibe hatsaran-tarehy tsirairay, dia tokony horesahina fa mahazatra matetika ny fanadiovana tsara ny faritra tokony hotsaboina. Mihoatra noho ny zavatra rehetra raha sendra manana makiazy isika izay indraindray afaka miraikitra foana. Izao no fotoana tokony makà taty silika kely ary ny volomaso dia tokony horaisina ao. Ka io no fototry ny fitsaboana, satria eo no manomboka ny dingana 'manitatra'. Mila mampihatra vokatra amin'izy ireo ianao, andraso minitra vitsy vao hihatra sy esorina izy io. Tokony holazaina fa io karazana ranoka natao ho entina hampiakatra io dia tsy hanimba ny masontsika.
Soso-kevitra ho an'ny aorian'ny fiakaran'ny volomaso
Aorian'ny fitsaboana toy izao dia tsy maintsy manaraka andiana tolo-kevitra mandritra ny 24 ora farafahakeliny ianao. Koa satria fotoana fohy izy io, dia azo antoka fa ho afaka hanaraka azy ireo amin'ilay taratasy ianao. Ny tsara indrindra dia ny tsy mandena ny volomaso ao anatin'ny iray andro, satria amin'izany fomba izany dia hisorohana ny volomaso tsy hianjera, satria vitantsika ny manainga azy ireo araka izay tadiavintsika.
Ary tsy tokony hasiantsika makiazy, satria mety foana ny mamela azy ireo miaina, ilain'izy ireo izany. Miezaha tsy manosotra ny masonao, noho ny antony mitovy amin'ilay teo aloha ihany ary amin'ny alina, miezaha matory mba tsy hikosehana volomaso na ondana ny volomaso. Aorian'ny ora voatondro dia ho afaka manamboatra, manasa azy ireo ianao ary manao fiainana tsy tapaka miaraka amin'ny fahazarana hatsaranao. Fomba iray hikarakarana ny volomaso tianay indrindra izany.
Impiry azo averina ny fitsaboana
Ny marina dia rehefa misy zavatra tiantsika ary miharatsy ny vokany amin'ny faran'ny herinandro dia maniry ny hahita azy miaraka aminy indray isika, saingy tsy tokony hirotorotoana. SATRIA tsara kokoa hatrany ny mamela antsika hanome toro-hevitra avy amin'ny manam-pahaizana. Hatramin'izay dia mila milaza isika fa hiankina amin'ny toetry ny volomaso ny zava-drehetra. Aorian'ny fitsaboana dia tsy maintsy avelantsika hiala ny volomaso mandritra ny iray volana ary avy eo avereno jerena. Marina fa misy tranga izay anaovany matetika kokoa saingy tsara kokoa ny misoroka. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Inona no atao hoe fanondrotana volomaso
Olona tsy atokisana: Inona no fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika?